Ny talata teo no sarona ny iray tamin’izy ireo, miaraka amina fiara marika Golf izay efa narahi-maso sy nenjehina teto an-drenivohotra. Rongony 100 kg no sarona, izay nokasaina hamidy 1 tapitrisa ariary. Ny namany roa hafa dia tafaporitsika tamin’ny vela-pandrika napetrakiny polisy.
« Nisy olona nanome vaovao ny mpitandro ny filaminana nilazafa misyireto mpanao varo-maizina rongony ireto. Narahina ilay fiara izay voalaza fa mpanatitra rongony eny amin’ny faritra Ambatomaro, amin’iny antsoina hoe bibilava iny. Napetraka teny an-toerna ny polisy tsy manao fanamiana. Nisy vokany izany ny talata teo », hoy ny tatitry ny polisy miady amin’ny zava-mahadomelina.
« Tafatsoaka ny roa tamin’ireo olona ahiahiana fa ilay milaza ho mpamily ilaya fiara ihany no tratra. Ny iray tamin’ireo nitsoaka dia mpividy ireo rongony ary ny iray hafa kosa dia ny tompony », hoy ihany ny fanazavanaavy amin’ny polisy.
Olona iray nanatri-maso ny fisamborana teny an-toerana no nanamafy fa « olona telo tokoa no tao anatin’ilay fiara « golf » ary efa samy nivoaka ny fiara izy ireo tokony ho tamin’ny 12 ora ».
Avy any Andranomena ireto rongony sarona ireto, araka ny fantatra. Ankoatra izay dia notanan’ny mpitandro ny filaminana ilay fiara Golf.
« Ahiana ho fiara halatra ihany koa io fiara io satria tsy misy taratasy mazava mikasika izany. Milaza ilay mpamily fa nilain’ny zandary ny taratasin’ilay fiara. Taty aoriana indray anefa dia nilaza izy fa very izany », hoy ny fanampim-panazavana. Naiditra am-ponja vonjimaika omaly ilay vaotondro ho mpamily ny fiara.